Sidee loo xiraa koofiyadii ninkii cirbadaha ku xirnaa?
Guriga Gacmahaaga gacmahaaga
Sida aad ogtahay, hadiyadii ugu duceyn iyo ugu fiicnayd ayaa lagu sameeyaa nafteeda. Maxaad u jeceshahay ninkeeda ama wiilkiisa jecel koofiyad kulul? Calaamadaha loogu talagalay koofiyadaha ragga oo leh cirbado fara badan ayaa kala duwana kuwa ugu caansan ee casriga casriga ah, isla sidaas oo kale ayaa lagu sheegi karaa qaababka - koofiyadaha ragga ee asalka iyo geesinimada maaha kuwa ka xun dumarka . Kala duwanaanta midabku ma aha mid aad u ballaaran, sidaas darteed midabada cawliga ah iyo midab madow waxay ku adkaanayaan inay ku tartamaan buluug iyo casaan. Waxaan ku talineynaa in lagu xiro koofiyadiisa diiran ee cirbadaha sheyga leh.
Cirbadaha lafaha ragga ee loo yaqaan 'kumbuyuutarka'
Nidaamka madaxa sida caadiga ah ee gobolka ee 60-65 cm Waxaan ufiirin doonaa nafteena. Si loo xiro koofiyeha qaboobaha nin leh cirbado isku dhejisan, waxaan u baahan nahay oo kaliya 50 g oo ah maaddo dhogmo maaddo ah. Laga soo bilaabo qalabyada aan qaadano cirbadaha xiran 3 iyo 5, iyo sidoo kale loogu talagalay sharaabaadyada dharka.
Talaabada ugu horeysa ee loo duubo cirbadaha feerka ah ee loo yaqaan 'knitting knit' ayaa ah qaab looxyo ah. Xaaladeena, waxaa jira 108 loox.
Sida dharka udubdhexaadka ah, waxaanu u qaybinaa wareegyada u dhaxeeya afar afduubka waxayna bilaabaan inay ka shaqeeyaan goobo.
Waxyaabaha yar yar: wareegga ugu horeeya waa in uu mar walba ku xiran yahay laba qaybood: waxaanu qaadanaa mid shaqeynaya kuna darayaa inta ka dhiman kadib. Tani waxay ka hortagtaa in alaabtu ay sii ballaariso oo ay si ammaan ah u hagaajin doonto wax kasta.
Hadda oo ku saabsan qaababka loogu talagalay koofiyadaha ragga oo leh cirbado is qaba. Ugu horeyn waxaan ku dhejinaa koofiyadaha ragga oo leh xarig cajiib leh 3x3. Sidaa darted, waxaan u bedeleynaa sadex weji iyo saddex waji.
Laakiin horey uga soo xigtay safka sagaalaad ayaa bilaabay in uu qeexo qaab. Marka hore, habka caadiga ah, iskutallaab afar wareega dhinaca midigta. Waxaan ka saari doonaa hal wareeg, ka dibna waxaan ku dhufaneynaa saddexda soo socda. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ku xirto badeecada qoyan ee aan la isku xirnayn oo ka saar cirbadaha saxda ah ee afaraad. Qalab aan xirnayn ayaa ku yaal bidixda. Hadda waxaad u baahan tahay inaad soo qaadatid saddex sirood oo isdiyaarin ah ka hor inta aadan ku dhejin cirbadda saxda ah ee saxda ah, iyo midka afraad ee dharka.
Hadda waxaan ku wareegeynaa lix wareeg oo xaq u leh midigta. Ugu horreyn, waxaan ka saari doonaa seddex wareeg oo la socdo cirridka saxda ah, saddexda kale ee la mid ah wajiga. Saddexda wareeg ee ugu horreeya ee aan la xidhin waxay u baahan yihiin in lagu xiro cirbada bidix ee ka dambeysa sheyga iyo ka saar lixda wareega ee soo socda ee cirbadda fiiqan. Xaaladdan oo kale, wareegyada hore ayaa sidoo kale aan weli ku xirnayn dhinaca bidix.
Mar labaad, soo qaado seddexda ka hor intaan loo baahnayn in ay hadlaan oo ay ku dhajiyaan wajiga aan xirnayn.
Hadda, sida laga soo xigtay safafka, waxaanu ku sharxi doonaa sida loo xiro koofiyadiisa nin leh cirbadaha faafa:
9: 3 dadka +2 + laga soo bilaabo +4 inay u gudubaan xuquuqda dadka - laga bilaabo (illaa dhammaadka taxanaha);
10: Sida laga soo xigtay sawirka wax kasta waa meelo xitaa;
11: 3 dadka +1 + banaanka + +1 oo laga soo bilaabo (ilaa / p);
13: 3 qof + 4 iskutallaabta + 2 ref (ilaa k / p);
15: 6 in laga gudbo +6 ilaa (ilaa / p);
17-21: 6 qof + 6 xaaladood;
23: 6 si ay uga gudubto 6 jeer (kahor k / p);
24: Sida laga soo xigtay sawirka, marka ugu danbeysa ma xiri karno 6 ka mid ah;
25: 5 + + liiska +4 qof (ilaa k / r);
27: 4 ereyga +4 iftiin +1 из 300 dadka (kahor);
29: 3 oo ka mid ah +4 liiska + 2 ka mid ah +3 dadka (ilaa k / r);
31: 2 oo ah +4 wixi 3-aad +3 dadka (kahor);
33: 1 erey +4 перек +4 изн +3 qof (ilaa c / r);
35: 4 waxay ka fekeraan +5 oo ka mida +3 dadka (kuma koobnayn 3 qof k / d).
Marxaladdaani waxay ku xiran tahay koofiyeha qaboobaha ee manka leh cirbadaha isku dhejisan waxay bilaabaan yareynta wareegyada. Waxaan helnay shan meelood. beeraha iyo sagaalka xayiraad. Meelaha aan ku dhex marno hal mid ayaan isku xidhnaa laba wareega. Sidaa daraadeed waxaan heysan doonaa shan iyo lix wareeg.
39-43: 6 qof +5 (6) waa (ilaa k / p);
45: 6 perk + 5 (6) izn (ilaa k / p);
46: mar kale waxaannu ka jareynaa wareegyada haray hal mar isla marna kama dhigno shan ilaa dhammaadka;
47: 4 oo ka mid ah +4 liiska +3 dadka (illaa k / r);
49: 3 ereyga +4 erayga +1 изн + 3 qof (до к / р);
51: 2 erey +4 forex2 + +3 dadka (kahor q / r);
53: 1 oo ka mid ah +4 liiska +3 ee + +3 dadka (kahor k / r);
55: 4 pep +4 laga bilaabo +3 qof (ilaa k / p iyo 3p kuma xirna);
57: 6 basbaaska +5 rt (ilaa k / p);
58 Dhammaanteen waxaannu wada xidhnay laba nin oo isku urursan,
59-61: 6 qof +4 qof;
62: markaan beeraha oo dhan wada xajinno,
63: 6 dadka +3 ee (illaa k / p);
65: 6 +3 oo ka baxsan jidka (kahor k / p);
66: mar kasta oo ka mid ah beeraha ayaa loo rogaa hal wareega;
67: 6 dadka horudhaca (ilaa k / p);
68: 6 qof + hoos u dhac yar
Heerka kama dambaysta ah ee casharka waa sida loo xiro kabtanka manka leh cirbadaha isku dhejisan:
69: Waxaa jira laba qof oo kaliya oo ah kumbiyadaha sare sagaal jeer (waxaan ka bilaabeynaa masaafada iyo muddooyinka 5, 4 iyo wixii ka dambeeya).
Waxaan sii wadi karnaa habkan illaa sagaal wareega loo tago waraaqaha.
Inta kale ee aad u baahan tahay inaad u gudubto dhamaadka nalka. Aad u adkeyn wejiga iyo jarjar xad-dhaaf ah.
Waxaan ka saari karnaa nambarka tufaaxa iskuna day inaad dhar cusub.
Sidee loo dhigaa sanduuq leh maro?
Suunka ayaa ka samaysan qoryaha "Hexafish"
Dusha sare ee badda
Abeeska macmalka caadiga ah
Istaag tuugada gacmahaaga
Garland ee qalbigooda leh gacmahooda - qurxinta fasaxa
Sidee loo dhigaa buste sariirta?
Sidee loo dhejin karaa waraaqaha waraaqaha?
Dusha sare ee suufka
Sida loo sameeyo sariirta Barbie?
Kudar dhagaxyo leh oo gacmihiisa ku jira
Kaalmo jilicsan oo ka sameysan qoryaha "Shnurki"
Baqshiishyada-carnations - 44 sawirrada ugu caansan ee munaasabadaha dhammaan marxaladaha
Suugada laga soo qaado yaanyo
Habeenkii dharka madow
Bandhiga Fashion - dayrta-jiilaalka 2015-2016
Gawaarida qabowga leh dherer sare
Ku dhiirigelinta muusikada tababarka
Sidee loo dubtaa karinta foornada?
Sidee ayaad hooyadaa ugu dhaqmi kartaa saaxiibkaaga?
Nafaqada habboon ee bisadaha
Macaroni oo ah noocyo kala duwan - cuntooyinka sahlan oo dhaqso ah loogu talagalay suxuunta delicious
Nudal lymf nodes
Ururinta Benetton - Spring-Summer 2014
Fiber miisaanka luminta - sida loo qaato?
Gacaladaha dharka casriga ah 2013
Waa maxay sharafta - calaamadaha iyo sida loola dhaqmo?
Ciddiyaha ayaa dillaacay - maxaad ka qabanaysaa guriga?
Jasiiradaha dayrta ee macquulka ah
Miranda Kerr iyada oo aan la samayn